Howl-galkii George H Bush ee Somalia waxaa mid u eg billaabay Donald Trump - Caasimada Online
Home Warar Howl-galkii George H Bush ee Somalia waxaa mid u eg billaabay Donald...
Howl-galkii George H Bush ee Somalia waxaa mid u eg billaabay Donald Trump
Washington (Caasimada Online) – Maalmihii ugu dambeeyay ee xukunkiisa George H.W Bush wuxuu go’aansaday inuu howlgal uu ka fuliyo Soomaaliya, isaga oo amray in inka badan 20,000 oo askari loo diro Soomaaliya “Si loo badbaadiyo kumanaan rayid ah oo geeriyoonayay”.
Bilooyin gudahood sawirkii dhimashada askarta Mareykanka ee lagu jiid jiiday waddooyinka Muqdisho ayaa badalay hanaankii Mareykanka uu ugu soo dhawaanayay Africa, waxaana ilaa iyo hadda muuqata in isbadalkii laga dhaxlay Bush lagula dhaqmayo Qaarada Africa.
Ciidamada Mareykanka ayaa ka howlgala Soomaliya iyo dalal kale oo Africa ah iyaga oo ka fuliya howlo meletari oo aan badneyn, waxaana kamid ah howlgalo gaar ah iyo diyaaradaha aan duuliyaha laheyn.
Xiligii Madaxweyne Bush, xaalka sidaa wuu ka duwanaa, Howlgalka Soomaaliya waxaa uu ahaa iyadoo la matalayay caawinaad loo sameynayay difaacida dadka oo laga difaacayay inay waxyeelo kasoo gaarto hogaamiye kooxeedyada marka gargaar lasoo gaarsiiyo, waxaana xiligaasi qaramada midoobay ay qiyaastay in 300,000 oo Soomaali ah inay dhinteen.
Madaxweyne Bush ayaa noqday madaxweynaha kaliya oo markii ugu horeysay soo booqday Soomaaliya, waxaa xiligaasi ciidamada Mareykanka ay hogaaminayeen howlgalkii Qaamada Midoobay ku caawineysay Soomaaliya, waxaana howlgalkaasi loogu magac daray “howlgalkii rajo soo celinta”.
Iyadoo xaalada bini’aadanimo kasii dartay, haddana dib u dhiska Soomaaliya ayaa noqday Muhiimada Koowaad, Dhamaadkii October 1993 markii ciidamada Mareykanka ay weerareen Maxamed Faarax Ceydiid, dad badan ayay diyaaradaha Mareykanka ku dileen Muqdisho, waxaana xigtay in 18 askari oo American ah lagu jiidjiido Muqdisho.
Madaxweyne Trump ayaa dhawaan shaaciyay inuu booqan doono aagaga Dagaalka, laakiin fursadaha lama oga inay Soomaaliya ka mid noqon doonto, waxaana mamulka Trumo hadda ciidamada ka jooga Soomaaliya lagu qiyaasaa 500.